DhizainiCrowd: Crowdsource Graphic Dhizaini kubva ku485,000+ Nyanzvi | Martech Zone
DhizainiCrowd: Crowdsource Graphic Dhizaini kubva ku485,000+ Nyanzvi
Muvhuro, October 26, 2015 Svondo, October 25, 2015 Douglas Karr
Isu tinoda akazara-nguva ekugadzira zvikwata atinoshanda pawebhusaiti saiti, infographics uye zvimwe zvinyorwa. Kuve nechikwata chekugadzira pawakagadzirira kunobatsira neako mhando yekubuda uye kuenderana. Izvo zvakati, kune imwechete-off mapurojekiti anokwira munhu wese kamwechete mune imwe nguva izvo isu tinongoda kuti tibude ipapo uye tiite. Pamwe iri kadhi rebhizinesi, logo yeimwe divi chirongwa, kana kunyangwe chigadzirwa kurongedza. Kana izvi zvamuka, isu takabudirira pakushandisa huwandu hwevashandisi.
DesignCrowd ndeimwe yemapuratifomu - ane anopfuura 395,000+ ekugadzira nyanzvi, unogona kuwana mhedzisiro inoshamisa. Uye iwe unogona kuita kuti basa riitwe zvisingadhuri uye nekukurumidza.
[box type = "kubudirira" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Tora $ 40 kubva pane chero dhizaini dhizaini + YEMAHARA Yakaratidzwa Project Rondedzero ($ 35 kukosha), chete pa DesignCrowd.com! Ingopinda kopani kodhi DC75OFF. Inobvumidzwa kusvika 10/31. [/ Bhokisi]
Chikuva chinoshanda zviri nyore:
Tumira Pfupi - Tsanangura chirongwa chako uye dudzira chiono chako mupfupi nhungamiro yevagadziri. Ive neshuwa yekupa yakawanda ruzivo uye kunyange mimwe mienzaniso. Iwe haudi kutambisa yakawanda yenguva yevagadziri nemirayiridzo yakashata.
Tora 100+ Dhizaini - Vagadziri vanobva pasirese pasi vanozoendesa zvigadzirwa zvako. Iwe uchagamuchira inbox in ziviso pane izvi futi.
Mhinduro uye Kudzokorora - Goverana zvigadzirwa zvako netiweki yako kuti uwane mhinduro uye zvaunofarira. Zvekare, ipa yakawanda mhinduro uye meseji maartist zvakananga kuvandudza.
Sarudza Zvakanakisisa - Sarudza dhizaini yako uye anokunda anobhadharwa!
DhizainiCrowd ndeye pamusika pamusika unopa logo, webhusaiti, kudhinda uye graphic dhizaini masevhisi nekupa mukana kune vanozvimiririra graphic vagadziri uye dhizaini dhizaina kutenderera pasirese. DhizainiCrowd inoshandisa Crowdsourcing 2.0 yakanaka, inogadzikana, yepamusoro mhando yekushambadzira uko mugadziri wese anogona kupihwa mari uye vatengi vanogona kutarisa edu epamusoro graphic vagadziri uye ruoko-sarudza avo avanoda.
DesignCrowd ane 100% mari yekudzoserwa garandi uye iwe unogona kuseta yako yekupedzisira ot 3, 5, kana gumi mazuva. Zvako zvigadzirwa zvekutanga zvinofanirwa kusvika mukati maawa makumi maviri nemana. Iyo inokurumidza iwe kupindura uye nekupa yakadzama mhinduro, ivo vanogadzira vazhinji vanozosvetukira mukati sezvo chiratidzo chinosvika kuchokwadi. Iwe unofanirwa kutarisira kugamuchira zvinopfuura makumi mashanu dhizaini kubva kune vakawanda vagadziri. Kana iwe ukasawana zvaunoda, unogona kukumbira kudzorerwa mukati memazuva makumi matanhatu eprojekti.
Kuzivisa: Tiri kusanganisira yedu yekubatana chinongedzo mune ino chinyorwa.
Tags: kugadzirwa kwemazanamapoka evanhuDesigncrowdChengetedza mari
Nei Uchifanira Kuisa Mu infographics Pakarepo
Mashandisiro Ekushandisa LinkedIn Yekushambadzira